स्थानीयद्धारा ४ किलोमिटर मोटरबाटो निर्माण | राेल्पा अनलाइन
स्थानीयद्धारा ४ किलोमिटर मोटरबाटो निर्माण
पहलमान घर्ती Friday, January 4, 2019
रोल्पा, पुस २०। रोल्पा नगरपालका ७ मा स्थानीयको सक्रियतामा ४ किलोमिटर मोटरबाटो निर्माण भएको छ । पछेनधार, बजंगेधार, बाजबांग खोला हुँदै सहिदमार्गको मीनाही जोड्ने मोटरबाटोको ४ किलोमिटर निर्माण भएको हो । स्थानीयका आवादी भित्र रहेका सल्लाका रुखलाई ठेकेदारलाई विक्रि गर्ने सर्तमा ४ किलोमिटर मोटरबाटो ठेकेदारबाट खनिएको हो । उक्त मोटरबाटो खन्ने क्रममा करिव २१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
मोटरबाटोको उद्घाटन गर्दै प्रदेश नम्वर ५ का सांसद दिपेन्द्र पुनमगरले स्थानीयलेको ठुलोे लगानी गरेको बताए । कतिपय ठाउँबाट माग कस्ता आउँछन् भने जसरी भएपनि गर्दिनु पर्यो भन्छन् पुनले भने आफ्नो केही पनि लगानी नगरी । स्थानीयले गरेको यो काम सराहनीय छ । आगामी दिनमा मोटरबाटोलाई स्तरोउन्नती गर्ने पनि आश्वासन दिए । उद्घाटन भएको मोटरबाटो हिउँदा बर्खा बाह्रै महिना यातायातका साधन चल्ने गरेर आगामी दिनमा काम गरिने समेत बताए । अहिले भन्दा पनि पछि बाटोमा नाली खन्दा, ग्राभेल गर्दा झन खर्च लाग्ने पनि बताए ।
स्थानीय उत्पादन बेच्नेको लागि पनि मोटरबाटो चाहिन्छ उनले भने आगामी दिनमा सामान ल्याउने मात्र नभइ यहाँ उत्पादन भएका सुन्तला, अदुवा जस्ता वस्तु पनि तल तिर पठाउनु पर्ने बताए ।
मोटरमा मान्छे चढ्न, सामान ओसारपसार गर्न र हामीसँग भएको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन सकिन्छ जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका प्रमुख राजबहादुर बुढाले भने सामान किनेर हामी गरिव भइसक्यौं हामी सामान बेचेर कहिले धनी हुने ? उनले भने । वन सम्पदा नभएको भए बाटो निर्माण गर्न कठिन हुने पनि बताए । बाटो खनेपछि भुक्ष, प्राकृतिक प्राकोप रोक्नको लागि बृक्षा रोपन गर्नुपर्ने पनि बताए ।
सोही कार्यक्रममा बोल्दै रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख पुर्ण केसीले नगरपालिकाका जनतालाई अझैपनि नगरपालिकाको स्तरमा उठाउन बाँकी रहेको बताए । आगामी दिनमा वडासँग सल्लाह गरेर उक्त काम गरिने पनि बताए । आगामी दिनमा नगरपालिकाबाट छुटिने बजेट यस्ता ठाउँहरुमा छुट्याउँछौं केसीले भने यो बाटो अन्तरगाउँपालिका जोड्नमा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्छ ।
रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावित्रा थापाले आगामी वर्षमा बजेट बाँडफाड हुने समयमा सम्झाएमा बजेट छुट्टीन सक्ने बताए । सबै काम स्थानीय तहका प्रमुखहरुले गर्ने भएकाले आफुले नीति दिर्नेशनलाई सहजिकरण मात्र गर्ने भएको बताए । बाटो मात्रै खन्ने कुरालाई ध्यान दिने भन्दा पनि मापदण्ड भित्र रहेर काम गर्दा उक्त काम दिगोपना हुने पनि बताए ।
बाटो के कसरी खन्नुभयो तपाईहरुलाई धन्यावाद रोल्पा नगरपालिका ६ नम्वर वडाका अध्यक्ष गणसिंह पुनले भने बाटो खन्यो खन्यो यसलाई मर्मत गरेर बाह्रै महिना चल्ने बनाउने होकी ? उनले भने । लिबाङ र माडी गाउँपालकाकका जनतालाई यो बाटोले फाइदा हुन्छ ।
स्थानीय समेत रहेका नेपाल पत्रकार महासंघका रोल्पा शाखाका अध्यक्ष मानसिंह विकले बाटोले दुर्गमका स्थानीयलाई यातायातको पहुँचमा ल्याएको बताए । स्थानीयले जे सक्यौं त्यही सहयोग गरेर खन्यौं उनले भने स्थानीयले आफुनो बारीमा भएको सल्लालाई आधा मुल्यमा भएपनि बेच्ने काम गर्नुभएको छ । आगामी दिनमा माडी गाउँपालिकाले समेत १०÷१५ लाख बजेट विनियोजन गरिदिने आश्वासन दिएको पनि बताए । गाउँमा एक घर एक धार पनि आवश्यक रहेको बताए ।
बाटो उद्घाटन कार्यक्रममा स्थानीयहरु बाजागाजा झाँकी सहित उद्घाटन स्थलमा उपस्थित भएका थिए । स्थानीयले नाचगान लगायका कार्यक्रम पनि गरेका थिए ।
इन्द्र बहादुर विकको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन कार्यक्रमा प्रमुख अतिथिका रुपमा प्रदेश ५ का सांसद दिपेन्द्र पुनमगर, विशिष्ट अतिथिका रुपमा जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका प्रमुख राजबहादुर बुढा, रोल्पा नगरपालिका प्रमुख पुर्ण केसी अतिथिहरुमा उपप्रमुखm मनकुमारी घर्ती, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य कर्मलाल परियार, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावित्रा थापा, नेकपा रोल्पाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापा, वडाध्यक्ष गणसिंह पुन, माडीगाउँपालिका सदस्य तिल बहादुर पुन, नेपाल पत्ररकार महासंघका अध्यक्ष मानसिंह विक, लगायतले आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए । भने बालाराम बुढाको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सञ्चालन लोकेन्द्र घर्तीले गरेका थिए ।
419 total views, 1 views today
स्मार्ट कृषि गाउँको लगानी, बालुवामा पानी